Aung Win Hein (Noble): 12/09/09
“ ကူညီသောလက်ကို ကမ်းပေးပါ...”
(၁၉၃၆)ခုနှစ်၊ ဘာလင်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ။
ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိပေမယ့် လက်မတွန့်ဘဲရဲရဲရင့်ရင့် ကူညီသူရဲ့အကြောင်းပါ။
အမေရိကန်အပြေးသမား ဂျက်စီအိုဝင်ဟာ တစ်နေ့တည်းမှာ
ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ် သုံးခုကို တင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
အဲဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်ကတော့အိုဝင်ကလူမည်းဖြစ်တော့
ပြိုင်ပွဲမှာ ဖိအားပေးမှု အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က အာဏာရှင်ကြီးဟစ်တလာနဲ့ သူ့ရဲ့နာဇီတွေက
သူတို့နိုင်ငံသားကို အနိုင်ရဖို့ အင်အားသုံးနေချိန်ပေါ့။
အိုဝင်ဟာပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ် နောက်ဆုံးပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ချိန်ပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ အရပ်မြင့်မြင့်၊ မျက်လုံးပြာပြာ၊ ရွှေရောင်ဆံပင်နဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ
အိုဝင်ဟာ စတင်ခုန်ရမယ့်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာ မတိုင်မီ
ဒီတစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခုခုလွဲမှားသွားပါက နောက်ဆုံးပိတ်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ခွင့် ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။
အရပ်မြင့်မြင့် ဂျာမန်က အိုဝင်နားကပ်လားပြီးသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပါတယ်။
အိုဝင်ကို အားပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် သတ်မှတ်စည်းကနေ နည်းနည်းခွာပြီးမှသာခုန်ပါ။
စည်းကျော်တာမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ” ဟုအကြံပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ အိုဝင်ဟာ အိုလံပစ်စံချိန်သစ်တစ်ခုထပ်ချိုးပြီး
(အဝေး ခုန်ပြိုင်ပွဲမှာ (၂၆-ပေ၈-၁/၄လက္မနဲ့စံချိန်တင်ခဲ့တယ်။)
အဲဒီနေ့နောက်ပိုင်း“လောင်”ကို သူနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှ မတွေ့တော့ပါ။
ဒါပေမယ့် လောင်ရဲ့ကူညီခဲ့မှုကို အိုဝင် ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီ၂၄ ကာရက်အရည်အသွေးရှိတဲ့ ရွှေရည်တွေဟာ
လောင်နဲ့ကျနော်တို့ကြားမှာ ရှိတဲ့မိတ်ဆွေရင်းချာဘဝကို တော့ ဘယ်တော့မှ မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါဘူး။”
“ မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့...”
တစ်ခါတုန်းကပေါ့... မခင်သန္တာဟာ လေးလသား ကလေးငယ်ကို ပိုက်ပြီး
ဒေါက်တာက “ကလေးကို နို့မှုန့်တိုက်သလား? ၊အမေနို့တိုက်သလား?”
“အဲဒါဆို အမေအင်္ကျီချွတ်လိုက်ပါ”
“ ခင်ဗျား….ဆရာဝန်ရှေ့ ရောက်နေတာပါ။
“ဒေါက်တာ ကျမ ပြောပါရစေဦး…….”
ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကအင်္ကျီနဲ့ဘရာစီယာကို ချွတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ မခင်သန္တာရဲ့ရင်သားနှစ်ဖက်ကို ဆရာဝန်က လက်နဲ့ဆုပ်နယ်တယ်။
အတန်ကြာတော့မှ မခင်သန္တာကို ပြောလိုက်တာက
“ အင်း၊ ခင်ဗျားက နို့မှမထွက်ဘဲ၊ကလေးအတွက်ဘယ်မှာအာဟာရဖြစ်မလဲ?”
“ဘယ်ထွက်မလဲရှင့်၊ ကျမက ကလေးရဲ့အမေမှ မဟုတ်တာ”
“ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားတဲ့စိတ်...”
ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီး ဗစ်တာဟူးဂိုး ကို စာပေဝါသနာရှင်အများစုက သိကြပါတယ်။
ဗစ်တာဟူးဂိုးဟာ ပြင်သစ်ဘုရင် တတိယမြောက် နပိုလီယံနဲ့မတည့်ဘူး။
ဒါကြောင့် သူချစ်တဲ့ပြင်သစ်ပြည်ကို ခွဲခွာပြီး ဂျာစီကျွန်းမှာခိုလှုံနေရတယ်။
ညနေစောင်းတိုင်းမှာ ကမ်းပါးယံပေါ်တက်ပြီး ခုံတန်းလေးမှာ ထိုင်လေ့ရှိတယ်။
ပြီးရင် နေဝင်ချိန်ရှုခင်းကို ငေးမောကြည့်ရင်း အတွေးနယ်ချဲ့နေတတ်တယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ ထိုင်ခုံက ထပြီး သူစိတ်တိုင်းကျတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲတစ်လုံးကို ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကျောက်စရစ်ခဲကသေးသေးလေးပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ကျောက်စရစ်ခဲကကြီးကြီးပေါ့။
ပြီးရင် ဒီကျောက်စရစ်ခဲကို အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ရေပြင်ထဲကို
ဗစ်တာဟူးဂိုးဟာအဲဒီလို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျောက်စရစ်ခဲတစ်လုံးစီကောက်ပြီးလွှင့်ပစ်တာကို
အနီးအနားမှာ ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေက သတိထားမိကြတာပေါ့။
ဒါနဲ့ပဲ တစ်နေ့မှာ ကလေးတွေထဲက နဲနဲကြီးတဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က
“ဆရာကြီး နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ဒီကိုလာပြီး ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေကို ပင်လယ်ထဲလွှင့်ပစ်နေတာ
ပြီးတော့ ဗစ်တာဟူးဂိုးဟာ ငေးသွားပါတယ်။
ပြီးတော့မှ ပြုံးပြီး ကလေးမလေးကို အလေးအနက်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားတဲ့စိတ်ကို လွှင့်ပစ်နေတာပါကွယ်…” တဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားတဲ့စိတ်ဟာ ရင်ထဲကို ရောက်လာပြီးဆိုရင်
အက်စစ်လိုပဲ ကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေကို လှိုက်စားတော့တာပဲ။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားတဲ့စိတ်ဟာ အနည်းနဲ့အများရှိတတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားတဲ့စိတ် ကလည်း ကြီးမားလာတော့တာပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားတဲ့စိတ်ကို နဲပါးသထက်နဲပါးသွားအောင်
အဲဒီကျောက်စရစ်ခဲကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားတဲ့စိတ်လို သဘောထားပြီး
ရောမတွေးခေါ်ရှင်ကြီး ဆီနီကာရဲ့စကားကို လက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါတယ်။
ထို့ပြင် ဒီစိတ်များ ကြာရှည်နေပါက
သူတစ်ပါးအပေါ် စာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်များ တစ်နေ့တခြား လျော့ပါးလာမည်ဖြစ်၏။”
အရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်မြတ်ဟာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ယာရံအဂ္ဂသာဝကဖြစ်သလို
ဉာဏ်ပညာအရာမှာ ဧတဒဂ်ရ မထေရ်မြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက သာဝတ္တိမြို့မှာ “ရာဓ”အမည်ရတဲ့ ပုဏ္ဏားအိုကြီးတစ်ဦးဟာ အထီးကျန်လူမွဲ၊
သူဆင်းရဲဖြစ်တာမို့ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာ ရဟန်းတော်တွေကို မှီပြီးနေထိုင်ရပါတယ်။
ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ် မထင်တာနဲ့”
တစ်နေ့မှာတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော်မူလို့ ပုဏ္ဏားအိုကြီးရဲ့အဖြစ်ကို
စုံစမ်းမေးမြန်းသိတော်မူတဲ့အခါ သံဃာအားလုံးကို ကျောင်းဆောင်ထဲမှာ စုဝေးစေပြီး
“ဘယ်သူဟာ ဒီရာဓ ပုဏ္ဏားကြီး ပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကို
“ တပည့်တော် ရာဓ ပုဏ္ဏားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကို သတိရပါကြောင်း”
မြတ်စွာဘုရားက“ ဘယ်လို ကျေးဇူးပြုဖူးသလဲ?
အရှင် သာရိပုတ္တရာမထေရ်က “တပည့်တော်တစ်ချိန်က သူ့အိမ်ရှေ့မှာ ဆွမ်းခံရပ်တော့
မြတ်စွာဘုရားက “အေး…ချစ်သားလို ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါလျက် ဒီ ပုဏ္ဏားကြီး
အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ဟာ မြတ်စွာဘုရားထံ ခွင့်ပန်ပြီး ရာဓ ပုဏ္ဏားကြီးကို
အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ရဲ့ အဆုံးအမသြဝါဒတွေနဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရတာကြောင့်
မကြာခင်မှာပင် ရာဓ ပုဏ္ဏားကြီးဟာရဟန်းကိစ္စပြီးမြောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီရဟန္တာဟာ ဧတဒဂ်ရ ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
“ လက်ဆောင်ပေးရင် သုံးရတယ်…”